မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: ဂြိုဟ်ဒေါသ ကိုဘောမ
မသေချာတတ်သော လောကထဲတွင် သေချာမှု အရှိနိုင်ဆုံး အနာဂတ်ကြိုအတွေးများဖြင့် လုံးထွေး သတ်ပုတ်နေကြရသူများ ကို ဗေဒင်ဆရာ ဟု ခေါ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင် သိလိုပြီး …မသိနိုင်သည့်အဆုံး …သိနိုင်မည့်သူကို လိုက်လာရှာဖွေသူများ ရှိသည်။ ဗေဒင်မေးသူ များ ဖြစ်လေသည်။
ဆရာ ….ဒကာ … ကိုက်ညီမိသည့်အခါ ဗေဒင်ဆရာ နှင့် ဗေဒင်မေးသူ …အလုပ်ဖြစ် ကြတော့သည်။ မေးတဲ့သူကလည်း မေးသည်။ ဖြေတဲ့သူကလည်း ဖြေသည်။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ မှန်ကန်ညီညွတ်တိုင်ဆိုင်သလဲ ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်များသာ သိပေလိမ့်မည်။
တစ်ကယ်တော့…..ဂဏန်းလေးများ ၊ သင်္ကေတလေးများ ၊ အက္ခရာများ …၊ လူပုံစံနှင့် လက်ဝါးပေါ်မှ အရေးအကြောင်းလေးများ ၊ ကဒ်များ ၊ အရိုးများ …စသည်ဖြင့် ..ဆိုင်ရာအချင်းအရာများအပေါ် သုံးသပ်ကြည့်ရှုပြီး ဘာဖြစ်မလဲ အနာဂတ်ကို ကြိုဖတ်ရခြင်းမှာ လွယ်ကူသည်တော့မဟုတ်ပါ။
ထိုထိုသော အချင်းအရာလေးများမှ ပြောနေသော တီးတိုသံများကို နားထောင်နားလည်နိုင်ဖို့ရန် မှာ ပါးနပ်ဖို့လိုသလို ..စိတ်ရှည်စွာ လေ့လာအကဲခတ်ကြည့်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့် …. လက္ခဏာ ဆရာတစ်ယောက်က ….မေးသူ၏ လက်ဖ၀ါးပေါ်မှ အရေး အကြောင်း များကို သေချာကြည့်ရှုပြီး အနာဂတ်ကို တင်ကြိုသုံးသပ်ပေးသည်ဆိုပါစို့ ။ တနင်္လာဂြိုဟ်ခုံပေါ်မှ အရေး အကြောင်းများတွင် မကောင်းသော ကျွန်းသဏ္ဍန် ၊ အပြတ်အတောက် ၊ အပြောက်အစက် ၊ အဖြတ်အထွက်များကို ကြည့်ပြီး…..ရေဘေးသင့်မည် ၊အန္တရာယ်ရှိမည်ကို တင်ကြိုအကဲခတ် နိုင်သည်။ ခရီး သွားလာနေစဉ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မည်ကို ကြိုပြောချင်လည်း ပြောနိုင်သည်။
သည်ဇာတာရှင်ကိုပင် …လက်ရိုးဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးဦးက …ကရကဋ်ရာသီတွင် အင်္ဂါနိစ်န၀င်းစီးနင်းသဖြင့် …ရေဘေးဥပဒ် ကြုံရတတ်သည်ဟုလည်း တင်ကြိုသုံးသပ်ချင် သုံးသပ်လာနိုင်သည်။ အဲ…လက်ဆန်း မှာလည်း ….ထိုနည်းလည်းကောင်း ဆိုပါစို့ ။ အင်္ဂါဂြိုဟ် ပုတိတွင် ရပ်တည်ပြီး မွေးနံဖြင့် ပက္ခ မိနေခြင်းကြောင့် ဘ၀တွင် ရေးဘေးဥပဒ် ကြုံရမည်ဟုလည်း ဟောဆိုလာနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ …..မည်သည့်ပညာရပ်ဖြင့်ပင်ဖြစ်စေ….ဆိုင်ရာဇာတာရှင် ၏ အနာဂတ်ကို ကြိုဖတ်နိုင်ခြင်း၊ သိမြင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ကြခြင်း မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ….အဖတ်မှားနိုင်သည် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များပေါ်ပေါက်ပြီး တိမ်းစောင်းနိုင်သည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းကတော့………ခက်သောကြောင့် ပဲဖြစ်လေသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်စားခဲ့မိသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာသည် အလွန် တွက်ရ လွယ်ပါသည်။ ထို့အတူ အလွန်တွေးရခက်ခဲလှသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အတွေးလမ်းစ မှန်သွားလျှင်မူ……ယင်းအချက်ကို အမြဲလက်ကိုင်ပြု အသုံးပြုလာနိုင်သည်မှာ အလွန်ပင် အသုံးဝင် လှပေသည်။
စိတ်ဝင်စားရန် ကောင်းသောအချက်မှာ မူလမဟာဘုတ်နှင့် ကောဇာမဟာဘုတ် သုံးသပ်ကြည့်ရှု ရာတွင်ပဲဖြစ်လေသည်။ ယင်းကဏ္ဍမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို …၊ ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများကို ကြည့်ရှု သုံးသပ်ရသည်မှာလည်း နက်နဲလှပါသည်။
အောက်ပါ နမူနာ ဇာတာကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ကောဇာ မဟာဘုတ် ဇာတာ
မူလဇာတာတွင် … မွေးနံသည် ပုတိတွင် ရပ်တည်ပြီး …မရဏတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ် ရပ်တည်နေကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ မရဏတွင် ရပ်တည်ထားသော ဂြိုဟ်သည် …အင်အား အလွန်ပြင်းထန်ပြီး … ခပ်ပြင်းပြင်းဘ၀ဖြစ်စဉ်များကို ဖြစ်ပွားရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်လေ့ရှိသည်။
မွေးနံအရ တနင်္ဂနွေသမီး ဖြစ်သဖြင့် …သူမသည် ..မူလကတည်းကပင် အင်္ဂါဂြိုဟ် အားနဲသော နေ့နံဖွားမျိုးဖြစ်နေသည်။ ထပ်မံပြီး မူလမဟာဘုတ်တွင် ထိုအင်္ဂါဂြိုဟ်သည်..မရဏတွင် ရပ်တည်ထားသောကြောင့် … ဂရုပြုအပ်သည့် ဂြိုဟ်ဆိုးမျိုးဟု ဆိုရပေမည်။ အကြောင်းမှာ ဦးညိုခေါ်….အပြင်ရန် ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်။
သည်နေရာတွင် …. ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို ဂရုစိုက်မည် ဆိုပါစို့။ ထိုဂြိုဟ်ပိုမိုအင်အားနဲပါးလာချိန်နှင့် ထိုဂြိုဟ် ..အင်အားကြီးမားလာချိန်များကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ………
သောကြာဂြိုဟ်အိပ် နှင့် ထူလ/အန္တရ ဒသာများ ၊ ယင်းအင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်အိပ်နှင့် ထူလ/အန္တရဒသာများသည် အင်အားကြီးမားချိန်များဖြစ်သည်။
အင်အားနဲပါးချိန်ကား …… အင်္ဂါနှင့် ပက္ခမိထားသော ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ဂြိုဟ်အိပ်နှင့် ထူလ+အန္တရဒသာ များ ဖြစ်ကြ၏။
ဂြိုဟ်တစ်လုံးသည် အင်အားကြီးမားလာချိန်တွင် သူရပ်တည်ရာ ဌာနအလိုက် ပီပြင်သော လုပ်ဆောင်မှု အကျိုးအပြစ်အ၀၀ကို ပုံဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာသည်။
ဂြိုဟ်တစ်လုံးသည် အင်အားနဲပါးလာချိန်တွင်မူ ….အကျိုးထက် အပြစ်ကို သေချာစွာ ပြုတော့၏။ အထက်ပါ အယူအဆနှင့် အချက်အလက်များသည် ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာ လာခဲ့ပြီးမှ ချမှတ်ထားသော ယူဆချက်ဖြစ်၏။
အထက်ပါ ဇာတာရှင်သည် မူလကတည်းက အင်္ဂါဂြိုဟ်အားနဲသော နေ့နံ နှင့် မူလမဟာဘုတ် ဇာတာဖွားလည်းဖြစ်သည်။ ကောဇာ တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုမည် ဆိုပါစို့…….။ မူလ မွေးနံ တနင်္ဂနွေ သည် ပုတိတွင် ရပ်တည်ပြီး ၊ ကောဇာဇာတာတွင် …ယင်းမွေးနံပေါ်သို့ အင်္ဂါဂြိုဟ် (မူလမရဏ) စီးနင်းထားသည် ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ အလားတူ ကောဇာဇာတာတွင် တနင်္ဂနွေ(မွေးနံ) သည် အထွန်းတွင်ရပ်တည်ထားပြီး ..အင်္ဂါဖြင့် ပင် ရန်ပက္ခ မိထားပြန်၏။
ထို့ကြောင့်………မည်သည့် မူလမဟာဘုတ်ဖွား တနင်္ဂနွေ သားသမီး မဟူ…ယခုကဲ့သို့သော နှစ်ခုကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ကျရောက်သည့် နှစ်မျိုးတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်အားနဲမှု ကြောင့် ၊ အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် စပ်လျဉ်းသော ဆိုးကျိုးအချို့ ကြုံတွေ့ရတတ်၏။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ဆိုးကျိုးပေးပါက………..
မီး နှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများကြောင့် ဥပဒ်ဖြစ်ရခြင်း
ရန်သူ အတိုက်အခံ ကြုံရခြင်း
စပ်တူနှင့် အစုရှယ်ယာ ကဏ္ဍများတွင် အခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း
သူတစ်ထူး၏ အဓမ္မ ပြုမှုကို ခံရတတ်ခြင်း …. စသည်ဖြင့် ဆိုးကျိုးတို့ကို ပြုတတ်ရာ၏။
တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်သည့်အပြင် မူလမဟာဘုတ်ဇာတာအရ….သုညကြွင်းဖွား တနင်္ဂနွေ သားသမီးလည်း ဖြစ်နေပါမူ ၊ တနည်းအားဖြင့် တနင်္ဂနွေ ပုတိဖွားလည်း ဖြစ်နေပါမူ ..ဖော်ပြပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ဆိုးအားတို့ကို ပိုမိုခံစားစေရတတ်ချိန် ဖြစ်လာလေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဇာတာရှင်ကား …..ထို့ထက်မက ပိုမိုပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ် အားနဲပျက်ပြားချိန်ကြုံလာလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ……………..
သူမသည် လက်ရှိအချိန်တွင် …အသက်အားဖြင့် ၃၇ နှစ် နှင့် ၂လ ခန့် ဖြစ်နေလေသည်။ ယင်းအသက်ပိုင်းကို ဒသာတွက်စစ်ကြည့်ပါက …………….
အဆိုပါ ဇာတာရှင်သည် အသက်အားဖြင့် ၃၅နှစ် ..၄လ ..၁၅ရက် မှ ..၊ ၃၇နှစ် ..၆လ အတွင်း ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ထူလ + ရာဟု အန္တရ ဒသာ ကို ဖြတ်သန်းရ၏။ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာအရ….အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု နှစ်ပါးစလုံးသည် ….အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ပက္ခမိထားသော ဂြိုဟ်များဖြစ်ကြ၏။ တနည်းအားဖြင့် …ဖြတ်သန်းဆဲဒသာ ထူလ/အန္တရ နှစ်ပါးစလုံးသည် ..အင်္ဂါဂြိုဟ် အင်အားပျက်ပြားစေသော ဒသာများ ဖြစ်နေကြ၏။
မုချမသွေ ဤဇာတာရှင်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ် ၏ ဆိုးအားကို ကြုံတွေ့ရတော့မည်မှာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါပေ။ ဤဇာတာရှင်သည် မည်သည့်အဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရပေသနည်း…။
ဇာတာရှင်အမျိုးသမီးသည် မုန့်မျိုးစုံ လက်ကားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ကိုင် အသက်မွေးသော ထက်မြက်သော အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် မြို့ပေါ်ရှိ ဈေးကြီးထဲတွင် ဆိုင်သုံးဆိုင် ခွဲဖွင့်ထားနိုင်သည်အထိ လုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ယခု မြန်မာခုနှစ် ၁၃၇၄ခုနှစ် ၊ ကောဇာမဟာဘုတ်ဇာတာအရ နှစ်ခုကြွင်းမဟာဘုတ်ဇာတာခွင် ကျရောက်ချိန် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးထူလ / ရာဟုအန္တရ ဒသာကို ဖြတ်သန်းနေချိန် နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသည့်ကာလ အတွင်း……………………ဈေးမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာတွင် ..သူမပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်သုံးဆိုင် အပါအ၀င် ကုန်များအားလုံး မီးထဲပါသွားခဲ့ရသည်။ အခါရက်ဈေးပိတ်ချိန်တွင် လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ….အပ်တိုတစ်ချောင်းပင် ပြန်မရလိုက်တော့ပါ။
အမျက်ဒေါသထန်သော အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် သူမကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသော အခြေအနေများကို လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ခြေမှုန်းပစ်ခဲ့တော့သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် မီးနှင့် လောင်မြိုက်ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများကို လွှမ်းမိုးထားသည် မဟုတ်ပါလား။
အချို့သော သူများသည် အင်္ဂါဂြိုဟ် ဆိုးကျိုးပေးလျှင် အိမ်ထောင်ကွဲ ၊ ရည်းစားပျက်မည် ချည်း ထင်မြင်ယူဆနေကြ၏။
အချို့ကလည်း သွေးထွက်သံယိုကိန်းချည်း ဟောဆိုကြပြန်၏။တစ်ကယ်တော့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးသည် ဆိုးကျိုးပြုရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ ကောင်းကျိုးပြုရာတွင် ဖြစ်စေ ….ကဏ္ဍအရပ်ရပ်တွင် ပြုနိုင်စွမ်းရှိ၏။
မမာမကျန်းဖြစ်နေသော လူနာတစ်ဦးအား အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ခွဲစိတ်ကုသရာတွင် တိမ်းစောင်းချွတ်ချော် သွားအောင် ဆိုးကျိုးပြုနိုင်၏။ တစ်သက်လုံး သိက္ခာ သမာဓိနှင့် နေလာသည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှင်မျိုးကို အရှက်ဟက်တက်ကွဲစေအောင် လည်း ဆိုးကျိုးပြုနိုင်၏။ ကာလအရှည်အကြာ လက်တွဲလာခဲ့သော စပ်တူအစုရှယ်ယာဝင်များကိုလည်း ….သဘောထားကွဲလွဲ ….ခွာပြဲအောင် စွမ်းနိုင်၏။ ရည်ရွယ်ချက် အလွန်ကြီးမားပြီး ..လုံ့လ၀ီရိယ အစဉ်ရှိနေခဲ့သူမျိုးကိုလည်း ….ဦးတည်ချက်ပျောက်ပြီး …စိတ်လေလွင့်သွားအောင် ပြုနိုင်စွမ်း၏။
နေ့နံ အသီးသီးထဲတွင် တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ဆိုးကျိုးပေးမှုကို အခံရတတ်ဆုံးဖြစ်၏။ သတိပြုဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။မှတ်ချက် / အင်္ဂါဂြိုဟ် ဆိုးကျိုးပေးတတ်ချိန်တွင် ခန္ဓသုတ်တော်ကြီးကို မနက်/ည ရှစ်ကြိမ်ဆီ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သင့်ရာ၏။
ချမ်းမြေ့သုတ ရရှိနိုင်ကြသည် ဖြစ်စေသေ၀် ။